नेपालमा २०६२/०६३ को परिवर्तन पछि शुरु भएको शान्ति प्रकृया संगै समावेशीकरणको मुद्दाले निकै चर्चा पाएको छ । समावेशीकरण लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भएको हुनाले पनि होला नेपालमा लोकतन्त्रको घोषणासंगै समावेशीकरणको विषयमा सबैले निकै चासो लिएका छन् । समावेशीकरण विना लोकतन्त्र दिगो हुन सक्दैन । राज्यका हरेक संरचना समावेशी नभएकै कारण पछिल्ला राजनीतिक व्यवस्थाहरुको विरुद्धमा जनताले आन्दोलन गर्दै आएको यथार्थ हामी सबैको अगाडी छ । हुनत यस अघिका व्यवस्थामा पनि सबैलाई समेटेर लगेको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासहरु भएका थिए । केही टाठा बाठा र शासकहरुको चाकडी गर्नेहरुलाई अवसर दिएर समावेशीकरणको ढोंग रच्ने प्रयास भएका हुन् । यी प्रयासहरु समावेशीकरण भन्दा पनि ती पछि पारिएका समुदायलाई कसरी प्रयोग गर्ने षडयन्त्रको रुपमा भएकोले यसले अधिकार वञ्चित हुुन परेका समुदायलाई फाइदा पुग्ने सवाल नै भएन ।
२०६२/०६३ को परिवर्तनले नेपालमा २४० वर्षसम्म चलेको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरि नेपाललाई गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पु¥याएको छ । यो व्यवस्था संगै समावेशीकरणको मुद्दाले पनि बल पाएको छ र वास्तविक अर्थमा जनसंख्याको आधारमा सबै वर्ग समुदायको समावेशीकरणको प्रकृया अगाडी बढेको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनले संविधान निर्माणको लागि समावेशी प्रतिनिधित्वलाई केही हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । जनसंख्याको आधारमा धेरै आदिवासी, जनजाति, मधेशी, समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ भने जनसंख्याको प्रतिशत भन्दा केही कम भए पनि दलित र महिलाको समेत प्रतिनिधित्वलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । यो लेखमा दलितहरुको मुद्दालाई मात्र केन्द्रित गरिएको छ । किनभने दलित समुदाय यस्तो समुदाय हो जसको नत छुट्टै संस्कृति छ न भुगोल नै, एउटै समाजमा एउटै रितिरिवाज र परम्परामा मान्ने भए पनि यो समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रुपमा पछि पारिएको छ, वञ्चितीकरण गरिएको छ ।
ऐतिहासिक संविधानसभामा अहिले कुल ६०१ जना सभासद् मध्ये ५१ जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरइएका छन् । यो संख्या कुल संख्याको ८.४ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा पछिल्लो पटक गरिएको जनगणना अनुसार दलितहरुको संख्या कुल जनसंख्याको १३ प्रतिसत मानिएको छ यद्यपि दलित सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले यो संख्या २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दावी गर्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा अहिले संविधानसभामा दलितहरुको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा हुन सकेको छैन । जुन मधेशी आदिवासीहरुको हकमा भने जनसंख्याकै आधारमा रहेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा नभए पनि यो प्रतिनिधित्वलाई दलितहरुको समावेशीकरणको लागि ठुलै उपलब्धि मानिएको
छ । यद्यपि यहा“ पनि दलित समुदाय समग्रमा ठगिएको छ । संविधानसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई यतिको अवस्थामा पु¥याउन नेपालका राजनीतिक दलहरुले पछिल्लो समयमा खेलेको भुमिकालाई कम भन्न मिल्दैन । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा नयाँ नेपालको मुल कानुन बनाउने स्थानमा दलितहरुको सहभागिता रहेकोले नेपालमा भर्खरै मात्र अभ्यासमा आएको लोकतन्त्रले दलित समुदायको वेढापार गराउने आशा यो समुदायले गरेको छ ।
विगतमा सँधै पाखा लगाइएको र वञ्चित गरिएको हु“दा पनि भर्खरै अभ्यासमा आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट दलित समुदायले बढी आशा गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर संविधान निर्मँणको मुख्य थलो संविधानसभामा दलित सभासद्हरुको उपस्थितिले मात्र के दलितहरुलाई सदाका लागि अधिकार सम्पन्न बनाउँछ त ? स्थानीय स्तरमा दलितहरुको कुनै पनि संरचनामा पहुँच नभए पछि के संविधानमा लेखेको कुराले मात्र दलितहरलाई अधिकार सम्पन्न बनाउला त ? पक्कै पनि वनाउँदैन त्यसैले देशको सबै संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरुको स्थानीय स्तरदेखि नै समावेशीकरण भयो भने मात्र लोकतन्त्रको प्रत्याभुति दलितहरुले गर्न पाउनेछन् । यो प्रश्नले उठाएको कुराको ग्यारेन्टीको लागि राज्यका हरेक निकायमा दलितहरुको समावेशीकरणको आवश्यकतालाई खट्काउँछ ।
यस अघिका व्यवस्थामा पनि दलितलाई केही सीमित अधिकार दिइएको थिए, तर ती कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । किनभने त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दलितहरुको पहु“च थिएन । अहिलेको अवस्था त्यो भन्दा भिन्न छैन । नयाँ संविधानमा दलितहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा त प्रसस्त लेखिएला, तर कागजमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयनको अवस्थामा पु¥याउनको लागि राज्यका हरेक निकायमा दलितहरुको समानुपातिक समावेशीकरण भएन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा सावित हुन सक्छ ।
नेपालमा समावेशीकरणको मुद्दा जति सजिलै चर्चाको विषय बनेको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यतिनै चुनौतीपूर्ण पनि रहेको छ । अहिलेसम्म केही सीमित जातजातिले मात्र रजाइँ गरी राज्यको साधन श्रोतलाई एकलौटी उपयोग गरिरहेको अवस्थामा अहिलेसम्म पाखा लगाइएका सबै समुदायलाई तुरुन्तै राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक तरिकाले समावेशी बनाउन निकै गा¥हो छ, तर असम्भव भने छैन । जसरी संविधानसभामा सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व गराउनको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता देखाएका छन्, त्यसरी नै
राजनीतिक दलहरुले आफुलाई समावेशी बनाएर यसको शुरुवात गर्नु पर्छ । देशलाई संचालन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने भनेका राजनीतिक दलहरु नै भएकोले पनि समावेशीकरणको शूरुवात राजनीतिक पार्टीहरुबाटै हुन आवश्यक छ र यो समावेशीकरण केन्द्रिय स्तरमा देखाउनको लागि मात्र होइन, प्रत्येक सानो भन्दा सानो इकाईसम्म यो समावेशी बनाउनु आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रको दिगोपन र समावेशीकरणको विषयमा सधै प्रतिबद्धता जनाइरहने हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरु भित्रको समावेशीको अवस्था र यसले
पारेको प्रभावको विषयमा अब विश्लेषण गरौं । नियतवश हो वा अन्य कुनै कारणले एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले मुख्य दल भनिएका कुनै पनि दलको शिर्षस्थ समितिमा दलितहरु निर्णायक भुमिकामा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । केन्द्रिय स्तरमा दलितको समावेशीको यो अवस्था छ भने जिल्ला गाउँ नगर र वडा स्तरमा दलितहरुको राजनीतिक पहुँच कस्तो रहेको होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सवै पार्टीमा दलितहरु आवद्ध छन्, तर कुनै पनि पार्टीको जिल्ला कमिटिको मुख्य पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा भने दलित छैनन् ।
भाषणमा जतिसुकै समावेशीकरणको कुरा गरे पनि राजनीतिक पार्टीहरुको स्थानीय संरचनामा अहिले पनि निश्चित जातजातिले रजाइ गरिरहेको तथ्यलाई नकार्ने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसंग नैतिक अधिकार छैन । कंचनपुर जिल्लाको मात्र कुरा गर्ने हो भने २०५ सदस्य रहेको एकीकृत नेकपा माओवादीको जिल्ला कमिटिमा २५ जना मात्र दलित रहेको छन् । वढि महत्वपूर्ण मानिएको ६८ सदस्यिय सचिवालयमा मात्र ५ जना दलित छन् तर निर्णायक पदमा भने दलित छैनन् । यसैगरि ५४ सदस्यिय नेपाली काँग्रेसको जिल्ला कमिटिमा जम्मा २ जना मात्र दलित छन्, नेपाली कांग्रेसले पनि दलितलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइएको पाइदैन । पार्टी एकीकरणको मुद्दालाई सहज बनाउन मुख्य पदहरुमा २,२ जनाको व्यवस्था गरिएको र कार्य सम्पदानको लागि कार्य सम्पादन समिति १५ सदस्यिय बनाइको छ, यसमा १ जना पनि दलितलाई का“ग्रेसले मुख्य पद दिन सकेको छैन ।
संविधानसभाको तेस्रो ठुलो दलको रुपमा रहेको नेकपा एमालेको कञ्चनपुर जिल्ला कमिटिमा पनि दलितहरुको सहभागिता औपचारिकता मात्र छ । ६१ सदस्यिय नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटिमा ६ जना दलित भए पनि मुख्य जिम्मेवारीमा दलितहरु छैनन् । जिल्लामा प्रभाव राख्ने मुख्य ३ दलले दलितहरुलाई स्थान नदिएको अवस्थामा कार्यकर्ता बढाउनको लागि मात्र भए पनि केही साना दलहरुले दलितहरुलाई मुख्य जिम्मेवारीमा दिएका छन् ।
मधेशी जनअधिकार फोरम (जसको कञ्चनपुरमा खासै राम्रँे अवस्था छैन) को जिल्ला अध्यक्ष दलित हुनुहुन्छ ।
यस्तै साना दलहरुले विभिन्न प्रलोभनमा पारी दलितहरुलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ । हुन त साना दलमा दलितहरुले पाएको मुख्य जिम्मेवारीलाई समावेशीकरणको एउटा खुडकिलो मान्नेहरु पनि थुप्रै छन्, तर साना दलमा दलितहरुले मुख्य जिम्मेवारी पाउनु नपाउनुको कुनै खासै अर्थ छैन । किनभने यी दलहरुको न त नीति निर्माणमा प्रभावकारी र निर्णायक भुमिका छ न कुनै ठोस मुद्दा नै । माले, एकीकृत, संयुक्त, मधेशी जनअधिकार फोरम, राप्रपा नेपाल, आदि जस्ता पार्टीमा केहीमा प्रमुख र केहीमा विभिन्न मुख्य पदमा दलितहरु क्ञ्चनपुर जिल्लामा रहेका छन् । दलितहरुको यी पार्टीमा रहेको उपस्थितिले दलित समुदायको हितमा खासै कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन । साना पार्टीमा सकृय भएका दलितहरु पनि व्यक्तिगत स्वार्थपुर्ति हुने दुब्लो आशामा पार्टीमा सकृय भएका देखिन्छन् ।
नितान्त मधेशी समुदायको मात्र कुरा गर्ने मधेशी जनअधिकार फोरम लगायतका मधेशवादी दलहरुमा पछिल्लो समयमा दलितहरुको सकृयताले उनीहरुको संलग्नता राजनीतिक उद्देश्य भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदामा केन्द्रित भएको प्रष्ट हुन्छ । अहिले साना पार्टीहरुले जिम्मेवारी दिएर अगाडी सारेका दलितहरु यो भन्दा अघि कहिल्यै पनि राजनीतिक उद्देश्यले कुनै पनि दलसंग संलग्न रहेका देखिएका थिएनन् । यसरी केही पाउला भन्ने आशामा साना राजनीतिक पार्टीलाई उपयोग गरौं भन्ने कुरा सोंचर विभिन्न पार्टीमा संलग्न भएका दलितहरुलाई आफनै उपयोग भइरहेको कुरालाई भने बुझन नसकेको देखिन्छ । केन्द्रिय स्तरमा आफनो उपस्थिति देखाउन राजनीतिक रुपमा चेतनशील भइ नसकेकाहरुलाई स्थानीय स्तरमा उपयोग गर्ने गरेको कुरा संविधानसभाको निर्वाचनबाट प्रष्ट भइसकेको छ । ठुला दलहरुले दलितहरुलाई कहिल्यै अवसर नदिएकोले जसले अवसर दिन्छ, त्यसैमा संलग्न भएको धारणा साना पार्टीमा सकृय दलितहरुको छ ।
मुख्य ठुला दलहरुले दलितहरुलाई निर्णायक जिम्मेवारी दिन नसकेको हु“दा दलितहरुले स्थानीय स्तरमा जिल्लाको समग्र विकासको लागि योजना बनाउन आयोजना गरिने जिल्ला, गाउँ, नगर परिषद्मा वा अन्य कुनै पनि नीति निर्माण र सामाजिक विषयमा सहभागी हुन पाउ“दैनन् । फलस्वरुप स्थानीय स्तरमा नत दलितमैत्री कुनै नया“ योजना बन्छन् न दलित वस्ती टोलमा विकासको कुनै कार्यक्रम नै पुग्छ ।
राजनीतिक पहु“च नभएकै कारण राज्यले दिने कतिपय सुविधाहरुको विषयमा दलितहरुले जानकारी नै पाउ“दैनन । राजनीतिक पार्टीमा सकृय भएर आफुलाई नेताजी भनाउन रुचाउने दलित नेताहरु समावेशीकरणको भाषण त खुवै गर्छन तर आफनै पार्टि भित्र समावेशीकरणको विषयमा भने चु पनि गर्न सक्दैनन । पार्टि भित्रैबाटै असमावेशी व्यवहार र समान अवसरको मुल मान्यताबाट वन्चित पारिदै कोटा पुर्याउन मात्र समावेश वनाइदै आएका दलित नेताहरु पार्टिकै गुणगान गाउनमा गौरव गर्छन । एकिकृत नेकपा माओवादी कंचनपुरको जिल्ला कमिटिमा ठाउ पाएका दलित नेता गणेश विक पार्टि भित्र भन्दा पनि सत्तामा समावेशी भए पुग्छ भन्नुहुन्छ । वहाको भनाइमा व्यक्तिले होइन विचारले मुद्धा सम्बोधन हुने भएकोले पार्टिले दलितको मुद्धालाई उठान गरेकोले व्यक्तिको प्रतिनिधित्व महत्वपुर्ण हुदैन ।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल दलित संघको कंचनपुर कमिटिका सचिव दशरथ ओड आफुहरुले हमेशा दलितहरुलाई निर्णायक तहमा पार्टी भित्र पनि स्थान मागि रहेको बताउ“छन् । तर उनकै पार्टीमा ५४ जनामा मात्र २ जना दलित परेका छन् । यसैगरि नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटि सदस्य रहेको प्रताप तिरुवा आफ्नो पार्टीमा विगतमा दलितहरुले जिल्ला कमिटि स्तरमा जिम्मेवारी पाएकै कुराले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । वर्तमान जिल्ला कमिटिमा महत्वपूर्ण पदमा दलितहरु नहुनुको कारण दलितहरुले बस्न नचाहेकोले भएको कुरा तिरुवा बताउनु हुन्छ । तर उहाँ पनि आफ्नो पार्टीले दलितको मुद्दालाई निकै जिम्मेवारी तरिकाले उठाएकोले दलितलाई महत्वपूर्ण पद दिने विषयलाई दोस्रँे प्राथमिकतामा नै राख्नुहुन्छ ।
स्थानीय स्तरमा राजनीतिक पार्टी भित्र समावेशीकरण यो कमजोर अवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्र फेरि पनि उनै टाठा बाठाहरुको लागि मात्र फलिफाप भएको छ । समावेशीकरणको साथसाथै लोकतन्त्रको अर्को महत्पूर्ण पक्ष भनेको विकेन्द्रीकरण पनि हो ।
त्यसैले लोकतन्त्रको प्रत्याभुति स्थानीय स्तरबाटै शुरु हुन्छ । लोकतन्त्रको यो आधारभूत मान्यतालाई आफुलाई लोकतन्त्रको हिमायती बताउने लोकतन्त्रवादी पार्टी र सर्वहारा हरुको मुक्तिदाता ठान्ने वाम पार्टीहरुले आफ्नै पार्टीको सिद्धान्तलाई पनि व्यवहारमा उतार्ने हो भने मात्र समावेशीकरणको शुरुवात हुन सक्छ । नीति निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेका राजनीतिक पार्टीहरु स्थानीय स्तरदेखिनै समावेशी बन्न सके भने मात्र निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको समग्र राज्य संरचना समावेशी बन्न सक्छ । यो सामान्य कुरा पनि राजनीतिक पार्टीहरुले गर्न सकेनन् भने लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको दिगोपन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि राजनीतिक पार्टीहरु स्थानीय स्तरदेखिनै समावेशी बन सक्नु पर्छ । ०००